फेरिरहने सरकार र कर्मचारीले सुकुम्बासीको समस्या बुझेनन् - Pradesh Dainik
फेरिरहने सरकार र कर्मचारीले सुकुम्बासीको समस्या बुझेनन्
बिहिबार, माघ १३, २०७८ , प्रदेश दैनिक
भिमराज अधिकारी, पथरी
देशैभर सुकुम्बासी समस्या रहेको छ । यो समस्या समाधान गर्नका लागि पटक पटक बनेका आयोगहरुले परिणाममुखी काम गर्न नसक्दा समस्या ज्युँका त्युँ छ ।
मोरङको पथरीशनिश्चरे नगरपालिकाले २०७८ माघ ५ गते वडा कार्यालयलाई पठाएको पत्रले यतिबेला पथरीशनिश्चरेबासीमा पूनः त्रास फैलाएको छ । नगरले वडा नं. ३, ४ र १० मा सूचना टाँसगरी जानकारी पठाउनुहुन भन्दै जग्गा खालि गराउने अदालतको पत्र सहितको सूचना पठाएपछि नगरवासीमा त्रास बढेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको पत्रका आधारमा नगरले पत्र पठाएको भन्दै वडा कार्यालय मार्फत सार्वजनिक भएपछि नेकपा एमाले पथरीशनिश्चरे १० ले बिरोध जनाएको छ ।
वडा कमिटिले विज्ञप्ती नै जारी गरेर बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो पत्रको आधारमा जग्गा खालि गराउन खोजेको भन्दै बिरोध जनाएको हो । समय समयमा फेरिरहने सरकार र कर्मचारीले सुकुम्बासीको समस्या नबुझ्दा घरबार बिहिन बनाउन खोजेको भन्दै सहभागी बक्ताहरुले आक्रोस पोखे ।
पत्रमा मुलतः सट्टा भर्नाको कुरा मात्रै उल्लेख गरिएको भएता पनि यसको आशय समग्र भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नै लक्षित गरेर प्रहार गरिएको भन्दै वडा कमिटि अध्यक्ष पर्वत थापाले विज्ञप्ती जारी गरेका छन् । जसको जोत उसैको पोत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै ३÷४ पुस्ता देखि उपभोग गर्दै आएको जमिन सकैले हडप्न खोजे जुनसुकै मुल्य चुकाउन तयार रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
अदालतले जम्मा २९ जनाका नाममा फैसला गरेपछि मोरङ जिल्ला प्रशासन मार्फत जग्गा खालि गराउनका लागि सूचना जारी गरेको हो । २९ जना मध्ये १९ जनाको जग्गा पथरीशनिश्चरे १० मा रहेको र बाँकी १० जनाको वडा नं. ३ र ४ मा रहेको अध्यक्ष थापाले जानकारी दिनुभयो ।
२०३८ सालदेखि बसोबास गर्दै आएका गर्जमान राईका अनुसार २०२४ साल तिर पदमसिंह पाख्रीनले यस क्षेत्रको जग्गा भोग्दै आएका थिए । ३०३९ सालमा पनि जग्गामा विवाद भएपछि तत्कालिन अञ्चलाधिस, सिडियो लगायतको उपस्थितीमा प्रहरी चौकी राखेर विवाद कम गराएका थिए । २०४२ सालतिर राज्यले दिएको पुर्जा लिएर अन्यत्र रहेका र उनिहरुको तिरो राज्यले लिएपछि समस्या झन बल्झिदै गएको राईको बुझाइ छ । यसको निकासका लागि स्थानीय सरकारले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने राईको बुझाइ छ ।
यसअघि देवी ज्ञवली नेतृत्वको आयोगले गरेका कामहरुलाई नै निरन्तरता दिदै हालको केशव निरौला नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले काम गर्ने तयारी गरेको छ । हालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले गम्भिरताका साथ नलिएको नेकपा एमाले केन्द्रिय सदस्य युवराज बास्कोटाले बतउनुभयो । सट्टा भर्नाका नाममा सम्पूर्ण जग्गामाथि धावा बोलेको बास्कोटाको बुझाइ छ ।
२०३५ सालमा सर्लाहीबाट बसाइ सरेर आएका पदम पाख्रिनलाई पनि अहिले आएको सूचनामा चित्त बुझेको छैन् । त्यसताका देखिको समस्या साधानका लागि पटक पटक कुटा उठेको भएता पनि ४३ वर्षसम्म पनि समस्या ज्युँका त्युँ रहेको पाख्रिनले बताउनुभयो । यसक्षेत्रबाट विभिन्न पार्टिहरुले निर्वाचन जितेर पटक पटक मन्त्री हुँदा पनि भोट बैँकको रुपमा मात्रै हेर्नाले समस्या समाधान नभएको पाख्रिनले बताउनुभयो ।